बित्तीय संस्था भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ऋण दिन असहमत - Nepal News - Latest News from Nepal
By nepalnews	 Last updated Apr 27, 2016
काठमाण्डौ, वैशाख १५ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुकम्प प्रभावितलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
उनीहरुले भूकम्प प्रभावितलाई उक्त ऋण दिन अस्वीकार गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट नै देखिएको छ । यसअघि, नेपाल राष्ट्र बैंकले शहरी क्षेत्रका भूकम्प प्रभावितलाई रु. २५ लाख तथा ग्रामिण क्षेत्रका प्रभावितलाई १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर हालसम्म भुकम्प प्रभावितहरुले जम्मा एक करोड ४० लाख मात्र ऋण पाएका छन्
नेपाल राष्ट्र बैंकको ६१ औं वार्षिकोत्सवमा गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल आफैंले नै भूकम्प प्रभावितले दुई प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण ऋण गत चैत मसान्तसम्ममा जम्मा एक करोड ४० लाख मात्र पाएको बताए ।
सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई दिने भनिएको दुई लाख अनुदानले घर बनाउन नपुग्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दुई प्रतिशत ब्याजदरबाट आफ्नो संचालन खर्च नउठ्ने भन्दै भुकम्प प्रभावितहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा गभर्नर डा. नेपालले भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा बैंकिङ पहुँच बढाउनका लागि बैंकहरुले शाखा, शाखारहित बैंकिङ र घुम्ती बैंकिङ सेवा संचालन गर्न स्वीकृति लिनु नपर्ने र भुकम्प प्रभावितले विना नागरिकता पनि खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
त्यस्तै, गभर्नर डा. नेपालले भूकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव परेपनि बैंकले अपनाएका नीतिगत उपायका कारण समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन नियन्त्रणवाहिर जान नपाएको उल्लेख गरे । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्ष कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा कमी आउने गभर्नर डा. नेपालको धारणा छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारले पूँजीगत बजेट ३२ अर्ब ४४ करोड अर्थात १५ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । पूँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले केही पूर्व गभर्नरलाई सम्मान गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने उपस्थित थिएनन् ।
एक व्यक्ति धेरै सहकारीमा आबद्ध हुुन नपाउने